एनआरएनए यूकेको छैठौं काउन्सिल बैठकमा चर्काचर्की ! उपाध्यक्षहरुद्वारा बहिष्कार - दर्पण संसार
एनआरएनए यूकेको छैठौं काउन्सिल बैठकमा चर्काचर्की ! उपाध्यक्षहरुद्वारा बहिष्कार
२०७७ चैत्र २, सोमबार २०:०५ बजे
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको छैठौं काउन्सिल बैठकलाई संघकै चार उपाध्यक्षहरुले बहिष्कार गरेका छन् । संस्थाभित्रको आर्थिक घोटालाको निष्पक्ष छानविनको माग गरिरहेका उपाध्यक्षहरुले अध्यक्ष पुनम गुरुङले एकपक्षीय ढंगले आयोजना गरेको काउन्सिल बैठकलाई बहिष्कार गरेका हुन् । बहिष्कार गर्ने उपाध्यक्षहरुमा प्रेम गाहामगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेल छन् । अर्का उपाध्यक्ष सुनिल खडकालाई बोल्ने मौका समेत दिइएन ।
आइतबार विहान निर्धारित समय भन्दा ढिला सुरु भएको छैठौ भर्चुअल बैठक करीव १२ घण्टा चलेको थियो । म्याराथन दौड भन्दा लामो कार्यक्रम संचालन गरिरहेका एनआरएनए युके महासचिव फडिन्द्र भट्टराईलाई आइसीसी सदस्यद्वय भक्त गुरुङ र रामशरण सिंखडाले प्रभावमा पारि चुनावी कार्यक्रमका रुपमा काउन्सिल बैठकलाई प्रयोग गर्न सफल भए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ महासचिव डा. हेमराज शर्माले राजनीतिक दलहरुलाई संघमा निषेध गर्नु पर्छ भनिरहंदा प्रवासी नेपाली एकता मंच युके ओली समूहका अध्यक्ष भक्त गुरुङले एनआरएनएको व्यानर राखेरै कार्यक्रममा उपस्थित भएर निर्देशन दिइरहेका थिए । गुरुङले यसअघि आफ्नो सदस्यता स्थगित गर्न आइसीसीलाई अनुरोध गर्ने घोषणा गरेका थिए। अर्का मनोनित आइसीसी सदस्य रामशरण सिम्खडाले काउन्सिल बैठकमा बोल्न कुनै भूमिका नपाउने भए पछि स्वर्गीय डा. चन्द्रकुमार लक्सम्बाको जीवनका बारेमा लामो व्याख्या गरि आफ्नो उपस्थिति जनाए ।
संघ संस्थालाई बिशेष भूमिका दिइने बैठकको संयोजक उपाध्यक्ष रोजीना राईलाई दिने भूमिका सिम्खडाले नै निर्माण गरेका थिए । आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरि कार्यक्रमको खाका बनाइएकाले उपाध्यक्ष राई नेतृत्वमा आए फेरी पनि एनआरएनए युकेमा हालिमुहाली गर्ने योजनामा सिंखडा छन् । जसको प्रतिविम्ब कार्यक्रम संचालनमा प्रस्ष्ट देखिन्थ्यो । वर्तमान अध्यक्ष पुनम गुरुङको चुनावी कमाण्डर तथा जनता समाजवादी पार्टी बेलायतका नेता चन्द्र गुरुङ पक्षलाई गोर्खा मामिलामा विशेष भूमिका दिइएपछि अर्का गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई पक्षले कार्यक्रम बहिष्कार गरेको थियो । त्यसबारे जुम बैठकमा सार्वजनिक रुपमै राई पक्षका गोर्खा अभियन्ताहरुले विरोध जनाएका थिए ।
संघका केन्द्रिय सल्लाहकार कुल आचार्यले सानोतिनो कुरामा नअल्झिन र घर भित्रको कुरा घर भित्रै सुल्झाउन आग्रह गरे। उनले संस्थालाई बचाउनु सबैको जिम्मेवारी हो भन्दै साझा संस्थालाई सहकार्य गरी साझारुपमा अगाडी बढाउन आग्रह गरे।
नेपाल मगर संघ युकेका अध्यक्ष सुनिल रानाले यस अघिको एनआरएनए युके कार्य समितिले गरेको आर्थिक घोटालाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष पुनम गुरुङले झण्डै एक घण्टा स्पष्टीकरण दिइन् । उनले संस्थाभित्रको घोटाला छानविन गर्न आफ्ना पक्षका केही व्यक्तिहरु मनोनयन गरेकी छिन् । उनीहरुले चांडै गुरुङलाई रिपोर्ट दिने बुझिएको छ ।
झण्डै १२ घण्टा चलाइएको काउन्सिल बैठकमा आगामी चुनावमा सहयोग गर्न सक्ने मानिसलाई छानि छानि लामो समय बोल्न दिइएको थियो । कुन संघ संस्थाले कति बजे बोल्न मिल्ने भन्ने बारेमा कार्यक्रमको खाका सार्वजनिक गरिएन ।
कार्यसमितिको बैठक नबसी कार्यक्रम तय
सामान्यता एनआरएनए युके कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले काउन्सिलको बैठक र कार्यक्रम पारित गरि समयसीमा सहितको खाका बनाउनु पर्नेमा एकपक्षीय रुपमा पुनम गुरुङसहित भक्त गुरुङ र रामशरण सिंखडा बसेर आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखि सत्ता कव्जा गर्ने शैलीमा कार्यक्रम गरियो । विगतमा भएका काउन्सिल बैठकमा पूर्ण कार्यसमिति बैठकले एजेण्डा, बिषयवस्तु र सहभागी संघसस्था नाम र समय निर्धारण गरि पारित गर्ने प्रचलन थियो । यसपालीको बैठकमा उपाध्यक्ष राई र अध्यक्ष गुरुङ भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्ति तथा आइसीसी सदस्यद्वय गुरुङ र सिंखडाको प्रभावले संस्थागत भन्दा व्यक्तिबादी प्रवृत्ति हावी भएको प्रस्ट देखियो ।
गौरी जोशी रिसाए
संघका केन्द्रिय सचिव अमेरिकी निवासी गौरी जोशीले प्रस्तुत गरेको स्मार्ट एनआरएनए तथा अनलाईन भोटिङको बारेमा जिज्ञासा राखेपछि कार्यक्रममा एकछिन विवाद भयो । दुई जना सहभागीले प्रश्न सोधेपछि सचिव जोशी स्मार्ट एनआरएनएमाथि आशंका गर्ने भन्दै रिसाएका थिए । एनआरएनए सल्लाहकार विश्वआर्दश पण्डितले प्रश्न सोध्न पूर्वाग्रह नहुने भन्दै थप प्रश्न सोधेपछि जोशीले माफी मागेका थिए ।
उक्त भेलाले महासचिव भट्टराई तथा कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोक्कालगायतको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै १३ बुंदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।